Shirka Wasiirada Arrimha Dibadda ee Urur goboleedka IGAD oo ka furmidoono magaalada Kampala – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaShirka Wasiirada Arrimha Dibadda ee Urur goboleedka IGAD oo ka furmidoono magaalada Kampala
Hiiraan Xog, Apr 23, 2018:- Magaalada Kampala ee Caasimadda dalka Uganda ayaa lagu waddaa in uu ka furmo Shirka Wasiiradda Arrimaha dibadda Urur goboleedka IGAD.
Shirkaan ayaa waxaa martigelinaysa dowladda Uganda, waxaana looga hadli doonaa Xaaladdaha Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed iyo Baratokoolka Dhaqdhaqaaqa Xorta ee Qaxootiga labadaasi Waddan ee gudaha dalalka IGAD.
Waxaa Shirkaasi ka qey gali doona Wasiiro, Xildhibaano iyo Khuburo kala duwan oo ka socda Hay’addaha Caalamka.
Dowladda Uganda ayaa dhawaan ku dhawaaqday in ay muhiim tahay in xal buuxa loo helo dhibaatooyinka ka jira dalalka ku jira Urur goboleedka IGAD oo ka kooban 8 dal.
Waxaa sidoo kale shirkaan diirada lagu saari doonaa sidii loo horumarin lahaa Qarxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Kenya.
Laacibka Maxamed Salax oo ku guulaystay abaalmarinta PFA ee 2018